‘विप्लव’ लाई पार्टीमा आउन प्रचण्डको आग्रह | Kendrabindu Nepal Online News
२६ पुष २०७६, शनिबार १४:०८
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ लाई पार्टीमा आउन ढिलाई नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
शनिबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजना भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विप्लवलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की लगायतलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै दाहालले भने, ‘भोलि स्वयम विप्लप पनि आउनुपर्छ । आउन ढिला गर्नुभयो भने त्यसले उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन । अरुलाई पनि फाइदा गर्दैन् । मलाई भरोसा छ एक दिन उहाँपनि यसैगरी आउने ठाउँमा पुग्छ । अरु साथीहरु पनि आउँछन् जो अहिले पनि सानोसानो चुलो चौकी राखेर बसिराख्नुभएको छ । त्यसबाट केही हुँदैन भनेर त बुझ्नुभएको छ होला । सबैलाई देशको स्थिति, राजनीतिक स्थायित्व, देशको विकासका बारेमा किनकी समाजवादतिर जाने भन्ने कुरामा कम्युनिष्ट नाम भएका जति सबै एक ठाउँमा आइपुगेको अवस्था छ । ’
अध्यक्ष दाहालले बाँकी रहेका सबैलाई अफ्ठ्यारो नमानी आउन अपिल गरे । गरिहाले, हिँडिहाले भनेर आफैलाई अनि देशलाई हानी पुर्याउने काम नगरि छिटो पार्टीमा आउन उनले सबैलाई आग्रह गरे । ‘अफ्ठ्यारो नमानिकन गरिहाले हिँडिहाले भनेर आफैलाई अनि देशलाई हानी पुर्याउने काम नगरीकन छिटो जोडिन् आउन अपिल गर्न चाहान्छु’, दाहालले भने ।
पार्टी प्रवेशपछि कार्कीले विप्लवको राजनीतिक साहस, नैतिकता र इमानदारिता नदेखेर पार्टी छाडेको बताए । ‘सहजै विप्लव छोडेर आउने पक्षमा म थिएन् । तर विप्लवको त्यो राजनीतिक साहस, नैतिकता र इमानदारिता देख्न सकिन् । हिरासतपछि मेरो एकान्त बास भयो । मलाई भेटने कोही मान्छे पनि आएन्’, उनले भने, ‘वार्तामा आउ आफ्ना कुरा राखौ भन्दा मान्ने अवस्था भएन् । आफुले गरेका कुरा र कामहरुको ‘ओनरसिप’ लिन सक्ने अवस्था नदेखेपछि विप्लव छोडे ।’
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
biplab, Mohan karki, prachand
Prevविकास बोर्डमा कसको पल्ला भारी ? यी ३ मध्ये को अघि ?
कलेज लाइफ मस्तीको एलाइभNext